M.M Qabridahar iyo Tababar Looqabtay Macalimiinta Luuqada Afka-Hooyo - Cakaara News
M.M Qabridahar iyo Tababar Looqabtay Macalimiinta Luuqada Afka-Hooyo
Qabridahar(cakaaranews)Isniin 13ka February 2017. Tababar Kor loogu qaadayo aqoonta barayaasha luuqada afka-soomaaliga islamarkaana ay soo agaasimeen wasaarada waxbarashada JDFI, Xafiiska waxbarashada DDSI iyo Hay’adaha RTI,USAID, iyo Hay’ada SCI loona hayay macalimiinta luuqada afka- hooyo ee dhamaan degmooyinka hoosyimaada Gobolka Qoraxey iyo qaarkamid ah Gobolka Doolo ayaa si habsami leh uga bilowday magaalada Qabridahar ee xarunta gobolka Qoraxey.
Hadaba, tababarkan ayaa waxaa shabakada wararka ee cakaaranews uga warbixiyay iskuduwaha kooxda tababarka bixinaysa ahna khabiir katirsan xafiiska waxbarashada DDSI mudane Xuseen Maxamuud Daahir oo sheegay in tababarkani yahay mid lagu kobcinayo nidaamka baris barasho ee macalimiinta luuqada afka hooyo. Wuxuuna intaa kudaray in tababarkan ay casharad bixinayaan macalimiin u xeel dheer barashada luuqada afka hooyo islamarkaana tababaro sare u soo qaatay.
Sidoookale, iskuduwaha kooxda oo hadalkiisa siiwata ayaa tilmaamay in tababarkani uu socon doono mudo 10 maalmood ah islamarkaana markuu dhamaado faaiido balaadhan u yeelan doona macalimiinta iyo ardaydaba.
Ugdanbayna dhankooda macalimiintii tababarka qaadanaysay oo dareenkooda kahadlay ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin tababarkan. Waxayna carabka kudhufteen in casharo cilmi ah islamarkaana faaiido badan uleh.